IPHEPHA LAMAZULU ASEZULWINI - Izwi Lamanje
Abafundi abaningi abasha bangene ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Kusenhliziyweni yami ukukushicilela kabusha lokhu namuhla. Njengoba ngihamba ngibuyele emuva ngifunde lokhu, ngiyathuka njalo futhi ngize ngithinteke lapho ngibona ukuthi amaningi ala "mazwi" - avame ukwamukelwa ngezinyembezi nokungabaza okuningi - ayenzeka phambi kwamehlo ethu…
IT bekulokhu kusenhliziyweni yami izinyanga ezimbalwa manje ukufingqa abafundi bami "amazwi" kanye "nezixwayiso" zomuntu enginomuzwa wokuthi iNkosi ingithumele kule minyaka eyishumi edlule, futhi lokho kuye kwakha futhi kwagqugquzela le mibhalo. Nsuku zonke, kunababhalisile abasha abasha abaza ebhodini abangenawo umlando ngemibhalo engaphezu kwenkulungwane lapha. Ngaphambi kokuthi ngifingqe lokhu “kugqugquzelwa”, kuyasiza ukuphinda lokho iBandla elikushoyo ngesambulo “sangasese”:
Izinsuku Ezimbili Ezengeziwe
USUKU LENKOSI - INGXENYE II
THE ibinzana elithi "usuku lweNkosi" akufanele liqondwe njengosuku "lwangempela" olungokoqobo. Kunalokho,
NgeNkosi usuku olulodwa lufana neminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. (2 Pt 3: 8)
Isiko loFata beSonto ukuthi “kusele izinsuku ezimbili” zesintu; eyodwa Ngaphakathi imingcele yesikhathi nomlando, enye, ingunaphakade futhi okuphakade usuku. Ngosuku olulandelayo, noma "usuku lwesikhombisa" yilolo ebengikhuluma ngalo kule mibhalo ngokuthi "iNkathi Yokuthula" noma "Ukuphumula kweSabatha," njengoba uBaba akubiza kanjalo.
Isabatha, ebelimele ukuqedwa kwendalo yokuqala, selithathelwe indawo yiSonto elikhumbuza indalo entsha eyasungulwa ngoVuko lukaKristu. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 2190
Obaba bakubona kufanele ukuthi, ngokwe-Apocalypse of St. John, ngasekupheleni "kwendalo entsha," kuzoba nokuphumula "kosuku lwesikhombisa" kweSonto.
Posted on January 4, 2009 Mashi 11, 2020 by Mark
USt. Michael Ukuvikela iBandla, nguMichael D. O'Brien
NGINE nginibhalela ngokungaguquki manje, bangane abathandekayo, cishe iminyaka emithathu. Imibhalo ibiziwe Izilwane wakha isisekelo; i Amacilongo Esixwayiso! kwalandelwa ukukhulisa leyo micabango, neminye imibhalo eminingi ukugcwalisa izikhala eziphakathi; Isivivinyo Seminyaka Eyisikhombisa uchungechunge empeleni ukuhlangana kwemibhalo engenhla ngokuya ngemfundiso yeSonto yokuthi uMzimba uzolandela iNhloko yawo ngokuthanda kwawo.Qhubeka ukufunda →
Posted on Mashi 21, 2008 November 21, 2017 by Mark
UKristu Usizi, nguMichael D. O'Brien
UKristu uhlanganisa umhlaba wonke, kepha izinhliziyo sezibandile, ukukholwa kugugile, udlame luyanda. Ama-cosmos reels, umhlaba usebumnyameni. Izindawo zamapulazi, ihlane, kanye nemizi yabantu ayisalalihloniphi iGazi leWundlu. UJesu udabuka ngomhlaba. Isintu siyovuka kanjani? Yini ezothatha ukuqeda ukungabi nandaba kwethu? —Uphawula Komculi
THE Isisekelo sayo yonke le mibhalo kusekelwe emfundisweni yeSonto yokuthi uMzimba kaKristu uzolandela iNkosi yawo, iNhloko, ngokuzikhandla okungokwayo.
Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 672, 677
Ngakho-ke, ngifuna ukubeka emongweni imibhalo yami yakamuva nge-Eucharist.
Posted on September 5, 2007 Mashi 24, 2020 by Mark
NGAPHAMBI Ngibeka ibalazwe lalemibhalo engezansi njengoba yenzekile kulo nyaka odlule, umbuzo uthi, siqala kuphi?